रामायणमा भनिएको राम-रावण युद्धः सत्ययुद्ध कि सत्ता संघर्ष - सुवास मल्ल
रामायणमा भनिएको राम-रावण युद्धः सत्ययुद्ध कि सत्ता संघर्ष ?
सुवास मल्ल २०७५ असोज ३१ गते बुधवार
रामायण नेपाली समाजमा अत्यन्त प्रचलित र नेपाली जनजीवनमा विशेष महत्त्व राख्ने ग्रन्थ हो । महर्षि वाल्मिकीले लेखेको यो ग्रन्थले भगवान रामका विविध पक्षहरुको गुणगान गाउँदै रावणलाई असत्यको प्रतीकका रुपमा चित्रित गर्दछ । तर रामायणका विभिन्न घटनाक्रमहरुले नै बताउँछ, राम र उनका सेनाले युद्धनीतिको खिल्ली उडाएर रावणलाई युद्धमा हराएका थिए । अरु घटनाक्रमहरुले त झन प्रष्ट बनाउँछ कि रावणले चाहेको भए रामायणको युद्धमा उनी सजिलै विजय प्राप्त गर्न सक्थे तर उनले युद्धलाई ‘जसरी पनि जित्नुपर्ने’ अर्थमा लिएनन् । उनी मर्न तयार भए तर युद्धमा छल तथा संहारको सहारा लिएनन् ।
यसरी हामी के निश्कर्षमा पुग्न सक्छौं भने राम र रावणबीचको लंका युद्ध न त असत्यमाथि सत्यको विजय थियो, न त रावणको अहंकारको संहार नै । यो युद्ध त राम, विभिषण र सुग्रिवको स्वार्थहरुलाई मिलाएर देवगणले राक्षस गणमाथि गरेको प्रहार मात्र थियो । रामायण नपढिकन विश्लेषण गर्नेलाई त भन्नु केही छैन तर रामायणको अध्ययन गरेका जो कोहीले पनि रावणलाई असत्यको प्रतीक मान्न पक्कै तयार हुँदैनन् ।
सर्वप्रथम हामी के कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ भने देव र राक्षस सत्य र असत्यको प्रतीक होइनन् । पुराणहरुमा देव र रक्षलाई दुई परस्पर विरोधी संस्कृतिहरुको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । कालान्तरमा रक्ष संस्कृतिमाथि देवगणको विजयपश्चात रक्षहरुलाई राक्षस नामाकरण गरी असत्यको प्रतीक मान्ने चलनको शुरुवात भयो ।
देवगणका नाइके विष्णु र यिनीहरुका राजा इन्द्र थिए । विष्णु कुटिल व्यक्ति (देवता) थिए भने इन्द्र भोगी चरित्रका थिए । ईश्वरहरु सून, ऐश्वर्य र सुन्दरी भोगका लालची थिए । उनीहरुको सून (स्वर्ण) प्रतिको अनुराग आफनो राज्यको नाम नै स्वर्ग राखेबाट प्रष्ट हुन्छ । देवगण ऐश्वर्य (धनसम्पत्ति) का लागि मरिमेट्ने गर्थे भन्ने कुरा कालान्तरमा आफूलाई ईश्वर नामाकरण गराएबाट पनि थाहा हुन्छ । उता रक्ष संस्कृतिलाई भगवान शिवको आशिर्वाद थियो । रक्ष संस्कृति सबैको रक्षा गर्नुलाई नै आफ्नो धर्म मान्ने गर्दथ्यो ।
देव र रक्षहरुको बेला बेलामा युद्ध परिरहन्थ्यो । यस्तै क्रममा रक्षहरुका राजा माल्यवणलाई पराजित गरी देवहरुले सूनको लंका रक्षहरुबाट खोसेर आफ्नो अधीनमा लिए । उनीहरुले त्यस राज्यको राजा कुवेरलाई बनाए । वास्तवमा कुवेरले लंकालाई सूनको बनाएका थिएनन्, बरु सूनको अधिराज्यलाई हडपेर आफ्नो बनाएका थिए ।
यो क्षतिबाट हायलकायल रक्षहरु पातालमुनि आंध्रालयमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका थिए । उनीहरुले सूनको लंका पुनः प्राप्त गर्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन्, तर आपसी फुटका कारण यो सम्भव भएन । त्यसै क्रममा माल्यवणका भाइ सुमालीले बनाएको कठिन जुक्तिबाट रावणको जन्म भएको हो । रक्षहरुको बल र देवहरुको दिमागको मेल भएको एक महापुरुषको जन्म गराउने र उसैमार्फत आफ्नो लंका फिर्ता ल्याउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ अनुसार सुमालीले आफ्नी बहिनी कैकसीलाई महर्षि विश्रवासँग बिहे गराउन राजी गराए ।
यसरी रावण देवगणमा नै जन्मिए । उनका पिता महर्षि विश्रवाका पिता महर्षि पुलस्त्य र पुलस्त्यका पिता बह्मा थिए । यसरी हेर्दा विश्रवाका जेठा पुत्र कुवेर उनका दाजु थिए । त्यति मात्र होइन, विश्रवाका दाजुका छोराहरु इन्द्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, वायु, चन्द्र उनका दाजुभाइ नै थिए । यसरी लंकाका राजा कुवेर कै भाइका रुपमा रक्षगणले लंकाको नयाँ राजा रावण जन्माए ।
रावणको बाल्यकाल विश्रवाको आश्रममा विश्रवा र सुमाली दुवैको रेखदेखमा भयो । उनले विश्रवाबाट चारै वेदको ज्ञान प्राप्त गरे भने सुमालीबाट शस्त्रज्ञान समेत लिए । उनमा यस प्रकार अद्भुत मनुष्यको निर्माण भयो । उनले देव र यक्ष संस्कृतिमा रहेका विकारहरुको विरोध गर्न थाले । शिवको तपस्याबाट विशेष वरदान पाए भने बह्माबाट अमरत्वको बरदान र ब्रह्मास्त्र समेत प्राप्त गरे । यसरी देवगणमा जन्मेर पनि प्रतिध्रुवका रुपमा विकास भइरहेका रावणबाट देवहरु नै भयभित भए र उनको यज्ञकर्म, तपस्या आदिमा बाधा पुर्‍याउन थाले । यस्ता गतिविधिले झनै रावणलाई उनको मामा सुमालीसँग नजिक बनायो ।
अन्ततः उनी विश्रवाको महर्षि बन्ने बाटो त्यागेर सुमालीको महायोद्धा बन्ने बाटोतर्फ उन्मुख भए । तर मामाको इच्छाअनुसार उनले लंकामा आक्रमण भने गरेनन् । आफ्नै दाजुका विरुद्ध धावा नबोल्ने वचन उनले दाजु र पितालाई दिएकाले उनी त्यसमा दृढ थिए । उनले लंका बाहेकका धेरै राज्यहरु जित्दै गए । लंका वरपरका धेरै प्रायद्वीपमा रावणको राज्य स्थापित भइसकेको थियो ।
सुमाली लगायतका रक्षगणलाई भने अरु सयौं राज्यहरुभन्दा लंकाकै बढी प्यास थियो । यही परिस्थितिलाई ख्याल गरेर ऋषि विश्रवाले सम्मुखमा आइसकेको संकट निवारणका लागि जेठा छोरा कुवेरलाई अलकापुरीको राज्य दिएर रावणलाई लंकाको राज्य सुम्पन सहमत बनाए । यस प्रकार के थाहा हुन्छ भने न सूनको लंका देवताले बनाएका थिए, न त यो रावणले जवर्जस्ती खोसेर लगेका थिए । बरु सूनको लंका त केही समय देवगणको कब्जामा थियो, जसलाई रावणले छुटाए । जसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर देवगणले रामलाई रामायणको युद्ध लड्न बाध्य बनाए ।
रावणका दश टाउका भएकाे बताइनुले उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा अरू १० जना मानिस बराबर भएकाे बुझाउँछ ।
रामको धेरै पक्षका बारेमा हामीले सुनेकै छौं, त्यतातिर अहिले चर्चा नगरौं । रामायणको युद्धका केही अमिल्दा पक्षहरुको चर्चा गरौं । लक्ष्मणले रावणको बहिनी सुपर्णखाको नाक काट्नु र रावणले रामको पत्नी सीताको अपहरण गर्नु दुवै असभ्यताको पराकाष्ठा थिए । तर यी प्रसंगहरु युद्धका लागि कारक तत्त्व बन्न सक्ने बलिया काण्डहरु थिएनन् । लक्ष्मणले माफी मागेका भए रावणले सीतालाई सकुशल छाडिदिने कुरा रामायणमा नै उल्लेख छ । तर देवगणका नायक विष्णुले नै लक्ष्मणलाई त्यसो नगर्न उक्साए ।
रामायणको युद्ध गराएर जुनै हालतमा रावणलाई पराजित गराउने सपना देखेका देवगणले त्यसका लागि रामलाई भन्दा छिटै प्रभावमा पार्न सकिने उनका भाइ लक्ष्मण, बाँदर सेनाका राजा बालिका भाइ सुग्रिव र रावणका भाइ विभिषणलाई प्रयोग गरे । त्यसैले त आफ्नो वाणबाट जीवनमरणको दोसाँधमा मृत्युशैयामा भएको बेला रावणसँग राजनीति सिक्न रामले भाइ लक्ष्मणलाई अह्राएका थिए । रावणको मुखनेर आएर बसेका लक्ष्मणलाई रावणले ‘सिक्ने भए गोडातिर बस्नु’ भनेर पहिलो शिक्षा दिएका थिए । रावणको शिक्षा प्राप्त गरेपछि नै लक्ष्मणको जीवन परिवर्तन भएको ठानिन्छ ।
रावणको विरुद्ध प्रयोग गर्नका लागि बानरराज बालिको विशाल सैनिकको साथ रामलाई चाहिन्थ्यो । यसको प्रबन्ध बालिमार्फत हुन नसक्ने देखेपछि उनका भाइ सुग्रिवलाई त्यहाँको राजा बन्ने ढोका खोल्नका लागि महत्वाकांक्षी बनाइयो । त्यस्तै ललासा रावणको भाइ विभिषणमा पनि जगाइयो । रावणले विजय प्राप्त गरेका राज्यहरुका पराजित राजाहरुलाई पनि उनीहरुको राज्य फिर्ता हुने शर्तमा सहयोग गर्न उक्साइयो । फलतः बालि र रावण दुवैको हत्या गरी लंकाको पराजयको प्रतिशोध लिने देवगणको आकांक्षा पूर्ण भयो । सुग्रिव र विभिषणको लालसाले पनि बाटो पायो । अन्य केही राज्यहरु पनि यही क्रममा लंका साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भए ।
सोझो बाटो र सहज तौर तरिकाबाट कुनै पनि हिसाबले यी महायोद्धाहरुलाई पराजित गर्न नसकिने ठहरका साथ युद्धको सामान्य नीतिको समेत खिल्लि उडाएर लंका साम्राज्यको पतन गराइयो । रावणले पनि युद्धलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर ‘जसरी पनि जित्ने’ रणनीति बनाएको भए संसार पतनको बाटोतर्फ पनि जान सक्थ्यो भन्ने रामायणमा उल्लेख छ । रावणले आफूसँग भएको ब्रह्मास्त्र समेत प्रयोग गरेनन् । उनले युद्धको अन्तिम दिन आफ्नो अधीनमा रहेका नवग्रहहरुलाई मुक्त गरी आफ्नै बलमा युद्ध लड्ने संकल्प गरे । सायद उनी सम्भावित पराजयबाट परिचित भएको हुनुपर्छ । ‘रावण: एक अपराजित योद्धा’ पुस्तकका लेखक शैलेन्द्र तिवारी लेख्छन्, “प्रकृतिलाई आफ्नो काबुमा राख्ने रावणले रामसँग युद्ध हार्ने कुनै कारण देखिँदैन । उनले रामको हातबाट मृत्यु स्विकार गरेको हुनुपर्छ ।”
त्यसो त युद्धको अगाडि विजयको कामनाका साथ गरिएको रामको पूजाको पण्डित रावण नै थिए । भनिन्छ उनले पूजा सफल बनाउनका लागि सीतालाई समेत पुष्पक विमानमा लिएर आएका थिए र कर्ताका रुपमा रामसँगै राखिदिएका थिए । तर पूजा सकिएपछि उनले पुनः सीतालाई आफूसँगै लिएर गएका थिए । यो कार्यको लंका दरवारमा घोर विरोध भएपछि उनले तर्क दिएका थिए, “पण्डित रावणले सीतालाई रामसँगै राखेर पूजा गराई विजयको आशिर्वाद दियो । तर राजा रावणले सीतालाई पुनः लिएर आयो किनकी सीता फिर्ता गराउनकै लागि युद्ध गरिँदै थियो । अर्थात पूजा गराउने पण्डित रावण हो र युद्ध लड्ने राजा रावण हो ।” लक्ष्मणको माफी नआउँदा सीता फिर्ता लाने एउटै बाटो युद्धमार्फत रावणलाई हराउनु नै थियो । लक्ष्मणलाई त कुनै पनि हालतमा माफी मगाउन देवगण तयार थिएनन् ।
युद्धको क्रममा लक्ष्मण रावणको छोरा ईन्द्रजीतको वाणबाट बेहोश भए । उनको उपचारका लागि आयुर्वेदका कुशल ज्ञाता आयुर्वेदाचार्य सुषेणलाई रावणले नै पठाएका थिए । जसको सिफारिसमा नै सञ्जीवनी बुटी खुवाएर लक्ष्मणलाई पुनर्जीवन दिइएको थियो । तर त्यसको केही दिनमा नै लक्ष्मणले यज्ञ गरिरहेको बखत निशस्त्र र एक्ला ईन्द्रजीतलाई हत्या गरी लाशलाई टुक्राटुक्रा पारेर फालिदिए । यो हत्याकाण्डको डिजाइनर विभिषण थिए ।
अन्तिम युद्ध अगाडि रावणले रत्नागिरी पर्वतमा आयोजना गरेको अविजित चण्डी यज्ञलाई हनुमान र अंगदले बानर सेना लगाएर ध्वस्त गराए । यज्ञमण्डपबाट होम गराइरहेका गुरु वृहस्पतिलाई अपरहण गरियो भने रावणपत्नी मन्दोदरीमाथि पनि दुर्व्यवहार भयो । सानोमा आफैंले पालनपोषण गरेको अंगदले दुर्व्यवहार गरेकोले त्यसलाई मृत्युदण्डको सजायँ दिनुपर्ने मन्दोदरीको मागलाई रावणले अस्विकार गरी अह्राएको काम गर्नेलाई नमार्ने भनी छाडिदिएका थिए । यज्ञबाट रावणले अग्नीरथ हासिल गर्ने र त्यसले रावणलाई थप शक्तिशाली बनाउने भयले विभिषणले लक्ष्मणलाई त्यसो गर्न उक्साएको देखिन्छ ।
श्रीलंकामा समुद्र सतहबाट ८,००० फिटकाे उचार्इमा रहेको रणगिल गुफा जहाँ रावणको मृत शरीर ममीकाे रूपमा रहेको मानिन्छ ।
युद्धमा रावणले कुण्डलिनी जागृत गर्ने भयले रामको सेनाले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेर रावणको सेनाको नाश गरिदियो । युद्धमा अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिने ब्रह्मास्त्र आजको एटम बमजस्तै घातक अस्त्र हो । त्यसो त रावणसँग पनि ब्रह्मास्त्र थियो, तर दुई ब्रह्मास्त्रको मारमा संसारमा ठूलो प्रलय आउने भएकाले रावणले त्यसको प्रयोग गरेनन् । बरु ब्रह्मास्त्र स्विकार गरी मृत्युको बाटो रोजे ।
रावणको जीवन नाविमा छ भन्ने विषयको जानकारी रामको सेनामा उनकै भाइ विभिषणलाई बाहेक कसैलाई थिएन । सत्तालिप्साले अन्धो भएका विभिषणले लंका सेनाको अन्त्यपछि रावणको जीवनको अन्त्यको त्यो राज पनि रामलाई भनिदिए र रावणको अन्त्य भयो ।
रावणको मृत्युपछि विभिषणलाई राजगद्दीमा सिंहासन गर्ने यति हतारो भयो कि उनले रावणको लासको कुनै वास्ता गरेनन् । राज्यभिषेक गरिसकेपछि बल्ल अन्त्यष्टीको तयारी गर्नका लागि लास ल्याउन आदेश दिए । तर त्यतिबेलासम्म आक्रोशित जनताले रावणको लास लुकाइसकेका थिए । नागकूलका जनताले राजसम्मानसहित उनको अन्तिम संस्कार गरेर डामुवाला भन्ने ठाउँको जंगलको बीचमा रहेको डाँडामा लासको अन्त्यष्टी गरेका थिए । त्यो लास हालसम्म पनि सुरक्षित छ र श्रीलंका सरकारले त्यो चिहानलाई संरक्षण गरेर राखेको छ ।
यसरी अनेकौं प्रसंगहरु हेर्दा रामायण कुनै पनि हालतमा सत्य र असत्यको लडाईं थिएन । यो त दुई पक्षहरुबीचको अनवरत संघर्षको अर्काे कडी मात्रै थियो । यसमा हार्नेलाई न त दानवीकरण गर्नु जरुरी छ, न त जित्नेलाई देवत्वकरण गर्नु नै । सत्यलाई सत्यकै रुपमा आत्मसात गर्दै सोही अनुसार दशैं मनाउँदा सबैको जय हुन्छ । भारत र श्रीलंकाका कयौं ठाउँहरुमा रावणको मन्दिर बनाइएको छ र दशैंमा भव्य पूजा पनि हुन्छ भने उनलाई किन दानव मान्ने ? त्यसै पनि रावणका पक्षधरहरुले रामलाई कहिल्यै दुष्ट मानेका छैनन् ।
दशैँकाे सम्बन्धमा एक एेतिहासिक तथा भाैतिकवादी दृष्टिकोण – क. रामराज रेग्मी
पछिल्लाे - अमेरिकाको समाचार पत्रद्वारा चिनियाँ उत्पादनबारे दुस्प्रचारको प्रयासः चिनियाँ सञ्चार माध्यम
अघिल्लाे - लामो अभियान (लङ मार्च)